asingazowani zvakapetwa kakawanda kupinda izvozvo panguva ino uye upenyu husingaperi munguva ichauya.’ ”
Nokutika unoti ndiri mupfumi, ndakapfuma, handina chandinoda iwe usingazivi kuti uri rombe rinotonzwisa tsitsi, uri murombo, uri bofu uye hauna kupfeka.
 Jesu akatiwo kuvadzidzi vake. “Kwaiva nomumwe murume mupfumi aiva nomutariri. Akacherwa kwaari kuti murume uyu akanga achimuparadzira zvinhu zvake. Akamudaidza akamuti, ‘Chii ichi chandiri kunzwa nezvako? Ndipire nezveutariri hwako ndinzwe nokuti hauchavi mutaririzve.’ Mutariri uya akazviti ndichaita sei Tenzi wangu zvaava kundibvisa pautariri? Simba rokutimba handina uye kukumbira ndinonyara.
 Jesu akadaidza vadzidzi vake ndokuti kwavari, “Zviro kwazvo ndinokuudzai kuti chirikadzi iyi murombo, yaisa, munochengeterwa upfumi hweTemberi zvinopfuura zvakandwa navamwe vose, nokuti ivo vose vaisa zvabva mune zvakawanda zvavanazvo. Asi iyo nourombo hwayo yaisa zvose zvinoiraramisa.”
 Akapinda muJeriko achipfuura nomo. Maiva nomumwe murume ainzi Zakeo. Aiva mukuru mukuru wavateresi uye ari mupfumi. Aida kuona zvakaita Jesu asi haana kukwanisa nokuda kwegurumwandira ravanhu nokuti iye akanga akapfupika. Ipapo akafanomhanyira mberi ndokukwira mumuonde kuti amuone nokuti akanga achizopfuura nepo. Jesu paakasvika panzvimbo iyoyo, akatarisa mudenga akamuti, “Zakeo kurumidza kuburuka nokuti ndinofanira kundogara kumba kwako nhasi.” Saizvozvo akakurumidza kuburuka akamugamuchira norufaro. Vanhu pavakazviona, vose vakanyunyuta vachiti aenda kundogara mumba momutadzi. Zakeo akamirawo achiti kuna Tenzi, “Chionai Tenzi ini ndichapa kuvarombo hafu yezvinhu zvangu. Kana ndakabiridzira munhu chinhu ndichamudzorera kakapetwa kana.” Jesu akati kwaari, “Nhasi uno ruponeso rwauya kumba ino nokuti murume uyu mwanakomanawo waAbhurahamu nokuti Mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaka nokuponesa chakarasika.” Pavakanga vakateerera zvinhu izvi, akaenderera mberi achivapa muenzaniso nokuti akanga ava pedyo neJerusaremu uye nokuti vakanga vachifunga kuti umambo hwaMwari hwakanga hwava kuda kutoonekwa. Naizvozvo akati, “Mumwe murume wokumbahuru akaenda kune imwe nyika iri kure kundopiwa umambo achizodzoka. Akashevedza varanda vake gumi akavapa gumi repondo, achiti kwavari, ‘Itai mhindu nayo kusvikira ndauya.’ Asi vanhu vake vaimuvenga. Vakatumira nhume dzokumutevera dzichiti, ‘Hatidi kuti munhu uyu atitonge.’ Paakadzoka apiwa umambo huya akati varanda vake vaakanga apa mari iya vadaidzwe kwaari kuti azive kuti mumwe nomumwe akanga awanei nemhindu. Wokutanga akauya kwaari achiti, ‘Changamire pondo yenyu yakabereka dzimwe pondo gumi pamusoro.’ Iye akati kwaari, ‘Hauchionaka muranda wakanaka! Pamusana pokuti wakatendeka muzvinhu zvidikidiki kudai uchatonga maguta gumi.’ Wechipiri akauyawo achiti, ‘Tenzi pondo yenyu yakabereka pondo shanu.’ Iye akati kwaari, ‘Iwewo uchatonga maguta mashanu.’ Mumwe akauya achiti, ‘Tenzi pondo yenyu iyi ini ndakaipfundira muhengechepfu, nokuti ndaikutyai nokuti muri munhu akaomarara. Munonhonga chamusina kuisa pasi, muchikohwa chamusina kudyara.’ Akati kwaari, ‘Ndinokupa mhosva nezvabva mumuromo mako, iwe muranda akaipa. Heya waitoziva zvako kuti ndiri munhu akaomarara anonhonga chaasina kuisa pasi nokukohwa paasina kudyara, ko zvino wakaregererei kuisa mari yangu mubhangi. Pandainge ndauya ndaizoitora yabereka.’ Akati kuna vakanga vakamira pedyo, ‘Mutorerei pondo iyoyo muipe kune ane gumi repondo.’ Vanhu vakati kwaari, ‘Tenzi, inga ane gumi repondo wani.’ Ndinokutaurirai kuti munhu wose anazvo achawedzerwa zvimwe asi uyo asina, kunyange chaanenge anacho achachitorerwa. “Asi zvemhandu dzangu dziya dzaisada kuti ndidzitonge dziunzei pano mudziuraye ndakatarisa.”
 Jesu paakazvinzwa akati kwaari, “Pane chinhu chimwechete chausina. Tengesa zvose zvaunazvo uzvigovere kuvarombo. Uchava noupfumi kudenga; ugouya ozonditevera.” Paakanzwa izvi akasuruvara nokuti akanga akapfuma zvikuru.
 Kuzoti Jesu agara pasi akatarisana nenzvimbo yaichengeterwa upfumi hweTemberi. Akaongorora uzhinji hwavanhu hwaikanda mari maichengeterwa upfumi hweTemberi. Vapfumi vazhinji vakakanda mari zhinji. Pakazosvikawo imwe chirikadzi, murombo, yakakandawo tumari tuduku tuviri twekopa twaisvitsa sendi. Jesu akadaidza vadzidzi vake ndokuti kwavari, “Zviro kwazvo ndinokuudzai kuti chirikadzi iyi murombo, yaisa, munochengeterwa upfumi hweTemberi zvinopfuura zvakandwa navamwe vose, nokuti ivo vose vaisa zvabva mune zvakawanda zvavanazvo. Asi iyo nourombo hwayo yaisa zvose zvinoiraramisa.”
 “Ndinodaro nokuti umambo hwedenga huchaita somunhu akanga ava kuenda kurwendo akadaidza varanda vake akaturira kwavari zvinhu zvake. Akapa mumwe wavo mari yematarenda mashanu, mumwe maviri, mumwe rimwechete, munhu nemunhu achipiwa maererano nezvaaikwanisa kuita. Ndokubva aenda zvake. Uya akagamuchira mari yamatarenda mashanu akabva aenda pakarepo akandoita mhindu nayo, akaita mari yamamwe matarenda mashanu. Ndizvozvowo zvakaita akapiwa mari yamatarenda maviri, akawana imwe mari yamatarenda maviri. Asi uya akagamuchira mari yetarenda rimwechete akaenda akandoricherera pasi akaviga mari yatenzi wake. Mumashure menguva ndefu, tenzi wavaranda vaya akauya akagadzirisana nezvemari yake navo. Uya akagamuchira mari yamatarenda mashanu, akauya kwaari namamwe matarenda mashanu achiti, ‘Changamire, makandipa mari yamatarenda mashanu, haano matarenda mamwe mashanu andakashava.’ Tenzi wake akati kwaari, ‘Hauchionaka muranda wakanaka wakatendeka. Wakatendeka mune zvidiki, ndavakukuita mutariri wezvakawanda. Saka chiuya tifare pamwechete neni tenzi wako.’ Uya akapiwa mari yamatarenda maviri akauyawo achiti, ‘Changamire, makandipa mari yamatarenda maviri heino imwe mari yematarenda maviri yandakashava.’ Tenzi wake akamuti, ‘Hauchionaka muranda wakanaka, wakatendeka. Wakatendeka mune zvidiki ndavakukuita mutariri wezvakawanda. Saka chiuya tifare pamwechete neni Tenzi wako.’ Uyawo akagamuchira mari yetarenda rimwechete akauyawo akati, ‘Changamire, ndakazviziva kuti muri munhu akaoma. Imi munokohwa pamusina kudyara. Munounganidza pamusina kumbokusha. Ndakatya, naizvozvo ndakaenda ndikandoviga mari yenyu pasi. Hei mari yenyu.’ Tenzi wake akamupindura achiti, ‘Iwe uri muranda wakaipa, nyope yomunhu. Heya waitozviziva zvako kuti ndinokohwa pandisina kurima, ndichiunganidza pandisina kukusha? Saka waifaniraka iwe kunge wakaisa mari yangu muBhangi. Pandainge ndauya ndaizowana mari yangu nemari yayainge yabereka. Saka mutorerei mari iyoyo yetarenda muipe kune ane gumi remari yamatarenda. Nokuti uyo anazvo anotopamhidzirwa zvimwe achitova nezvakatowanda — wanda asi uyo asina, kunyange chaanenge anacho achatorerwa. Uye muranda uya asina maturo mukandei kunze kurima. Ikoko vanhu vachachema vachirumanidza mazino.’
Yakadyarwa muminzwa ndouyo anonzwa izwi asi kuzvidya mwoyo nezvapanyika nokutorwa mwoyo noupfumi, zvinovhunga izwi, rokundikana kubereka muchero.
Munhu wakanaka anosiira vana vevana vake nhaka asi upfumi hwomuipi hunochengeterwa varurami.
 Remekedza Tenzi nezvaunazvo uye nembesanwa dzinotanga kuibva. Matura ako anobva azadzwa nezvakawanda makuvi ako ewaini anozopfachukira.
Kugara maoko kunounza urombo asi kugwinyisa maoko kunopfumisa.
Upfumi hwomupfumi inhare yake yakasimba anotofunga kuti rusvingo rusingakwiriki.
VokwaEfuremu vanotozviti zvavo, ‘Hauoneka, ndiri mupfumi, ndazozviwanira upfumi.’ Asi upfumi hwavo hwose ihwohwo haumbovapunyutsa pamhosva yavakapara.
Judha chaiyo icharwisana neJerusaremu. Upfumi hwamarudzi akatenderedza ose huchaunganidzwa hunoti ndarama nesirivha namatutu — matutu ezvokupfeka.
Ichiwo chipo chaMwari chokuti munhu wose anopiwa upfumi nepfuma nesimba rokugona kufadzwa nazvo, agone kugamuchira mugove wake nokuwanawo rufaro runobva mubasa raanoshingairira kuita.
Munhu anopiwa naMwari upfumi nepfuma noukuru zvokuti haana chaanenge achida chaanoshaya asi Mwari orega kumupa simba rokuti afadzwe nazvo asi mutorwa ndiye wofadzwa zvake nazvo. Izvi hazvinzwisisiki uye chinhu chinorwadza.
Naizvozvo unofanira kurangarira Tenzi Mwari wako nokuti ndiye anokupa simba rinokuwanisa upfumi. Anoita izvi kuti achengete chitenderano chaakapika kumadzitateguru ako sezvazviri pari nhasi.
Chikomborero chaTenzi chinopfumisa, hapana kushanda kunohupamhidzira.
 Vakarurama zvavanazvo zvishoma zvirinani pane zvakawanda zvavakaipa vazhinji. Maoko avakaipa achatyorwa asi TENZI anotsigira vakarurama.
 Zviri nani kuva munhu ane zvishoma uchitya Tenzi pano kuva noupfumi huzhinji uine nhamo. Zviri nani kudya nomurio pane rudo pane kudya nenyama yechimhuru chakakora pano ruvengo.
 Chenjerera kuti urege kufunga mumwoyo mako woti, ‘Upfumi uhu hwakabva musimba ramaoko angu.’ Naizvozvo unofanira kurangarira Tenzi Mwari wako nokuti ndiye anokupa simba rinokuwanisa upfumi. Anoita izvi kuti achengete chitenderano chaakapika kumadzitateguru ako sezvazviri pari nhasi.
Upfumi hwomupfumi iguta rake rakasimba urombo hwavarombo ndihwo hunovaparadza.
 TENZI ndiziviseiwo magumo angu uye kuwanda kwamazuva angu itaiwo kuti ndizive kusatana kupera kwamazuva angu. Tarisai muone kuti makaita kuti mazuva angu aite sezvanza zvamaoko kureba, nguva youpenyu hwangu hapana zvairi kwamuri. Chokwadi munhu wose akangoita sefemo zvaro. Dzepfunde Zvirokwazvo munhu anofamba somumvuri, chokwadi vanotambudzika nhando; munhu anounganidza asi haazivi anozozvitora.
 Kana ukaona mudunhu varombo vachidzvinyirirwa, uye ruenzaniso nokururama zvakandwa pasi ngazvirege kukushamisa nokuti mukuru-mukuru anoongororwa nomukuru kwaari uye kuna vamwe vakuruwo pamusoro pavo. Chinhu chakanaka kwazvo kuti nyika ive namambo asi iri nyika inorimwa. Munhu anoda mari haaguti mari uye anoda upfumi nokubereka kwahwo izvozviwo hazvinzwisisiki. Upfumi hukawanda vanohudya vanowandawo muridzi wahwo chaanowana chii mahuri kusiya kungohuona nameso? Hakusi kunaka ikoko kwakaita hope dzomushandi kunyange adya zvizhinji kana zvishoma, kuwandirwa kwomupfumi nomupfumi kunomushaisa hope. Kune chimwe chinhu chakaipa chandakaona pasi pedenga chokuti munhu anozviunganidzira upfumi hwozomukuvadza. Upfumi ihwohwo anorasikirwa nahwo mukuita zvakaipa sarei mumaoko asisina chaanacho asi iye ari baba womwana Sokubuda kwaakaita mudumbu maamai vake ndomuendero waachaita ari musvi, sokuuya kwaakaita pasina chaangatakure chebasa rake chaangaende nacho mumaoko. Kunyange ichochi chinhu chakaipisisa; samauiro aakaita ndiwo maendero aachaita. Chaakawana chii zvino zvaakashandira mhepo zvayo kudaro achipedza mazuva ake ose murima nomukutambura mumwoyo nokurwara nokushatirwa.
 Achatozviona kuti kunyange vangwaru vanofa. Benzi nedununu vanoparara zvimwechetezvo vachiisiira upfumi hwavo kuna vamwe. Makuva avo ndiwo achava misha yavo nokusingaperi. Ndiyo nzvimbo yavo yokugara pazvizvarwa zvose. Kunyange vakatumidza nyika namazita avo. Munhu haagoni kuramba ane mukurumbira wake; akangoitawo semhuka dzinoparara. Iwoyu ndiwo mugumo wavanhu vanozvitora; mugumo wavanhu vanofarisa nezvavanazvo. Dzepfunde Sehwai, vanotemerwa kuenda kunzvimbo yavakafa. Rufu ruchava mufudzi wavo vakarurama vachavatonga mangwanani chaiwo uye muviri wavo uchadyika. Nzvimbo yavakafa ndiyo ichava musha kwavari. Asi Mwari achandinunura upenyu kusimba renzvimbo yavakafa nokuti achandigamuchira. Dzepfunde Usakatyamare zvako kana munhu akava mupfumi kunyange mbiri yemba yake ikadhuma nokuti paanofa hapana chaanoenda nacho. Mbiri yake haidziki naye ichimutevera nokuti kunyange zvazvo paaiva mupenyu aizviti akakomborerwa uye kunyange akarumbidzwa zvake paanenge abudirira. Achatoenda kuchizvarwa chamadzitateguru ake vasingazombofa vakaona chiedza. Munhu haagoni kuramba aine mukurumbira wake akangoitawo somhuka dzinoparara.
“Tarisai muone munhu asina kuda kupotera muna Mwari; asi akavimba nokuwanda kwoupfumi hwake akapotera muupfumi hwake.”
Munhu anoda mari haaguti mari uye anoda upfumi nokubereka kwahwo izvozviwo hazvinzwisisiki.
2 Makoronike 1:11-12
 Mwari akati kuna Soromoni, “Pamusana pokuti izvi ndozvawada nemwoyo wako ukarega kukumbira kuti uve nezvinhu kana upfumi kana ukuru kana kuti vanokuvenga vafe kunyange kuzvikumbirira upenyu hurefu, asi wazvikumbirira ungwaru noruzivo kuti utonge vanhu vangu vandakati iwe uve mambo wavo, naizvozvo ungwaru noruzivo watozvipiwa. Ndichakupawo upfumi nezvinhu zvakowo noukuru zvisina ati akambova nazvo pamadzimambo akakutangira kana achauya mushure mako achava nezvakadaro.”
1 Madzimambo 3:11-13
 Mwari akati kwaari, “Pamusana pokuti wakumbira izvi ukarega kuzvikumbirira upenyu urefu kana upfumi kana kukumbira kuti vavengi vako vafe, ukazvikumbirira kunzwisisa kuti uwane matongero, chinzwa zvawakumbira ndozvandava kukuitira. Ndinokupa ungwaru nomwoyo unonzwisisa zvokuti hapana kumboita mumwe akaita sewe kana kuzovazve nomumwe akaita sewe. Uye ndinokupawo zvimwe zvausina kukumbira zviviri izvi zvinoti upfumi nechiremera zvokuti hapana mumwe mambo angazomboenzaniswawo newe upenyu hwako hwose.
Munhu anowanziridza upfumi hwake nechimbadzo kana kungowedzerawo anounganidzira munhu ane tsiye nyoro kuvarombo.
 Areruya. Akakomborerwa zvake munhu anotya TENZI, anofarira mitemo yake zvikuru. Zvizukuru zvake zvichava zvakasimba panyika zvizvarwa zvakarurama zvichakomborerwa. Musha wake uchazara noupfumi nepfuma uye ururami hwake huchagara nokusingaperi.
Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.
“Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri, nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe, kana kuti anoti kwati kwati nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva muranda waMwari nomuranda wemari. “Vimba naMwari kuti anokupa zvinokuraramisa.
Kunyatsoronga zvinhu nemazvo, kunowanisa zvakawanda, mandichimbidzike anobereka urombo.
Varombo havazomboperi munyika, naizvozvo ndinokuudza kuti uve noruoko rwakatambanuka runopa hama yako, murombo naasina chokubata ari munyika yenyu.
1 VaKorinte 16:2
Pamusi weSvondo, svondo rimwe nerimwe munhu oga oga ngaaise zvinhu parutivi azvichengete maererano nokuwana kwake kuti zvirege kuzounganidzwa ndatouya.
1 Petro 5:2
Fudzai danga raMwari rakaiswa mumaoko menyu, kwete sokunge munomanikidzwa asi nomwoyo unoda, kwete pamusana pokuda kuzvipfumisa zvinonyadzisa asi muchitozvifarira.
 “Kwaiva nomumwe murume mupfumi aipfeka hanzu dzoruvara rwehute nedzerineni yakanakisisa achidyiririra zvikuru zuva nezuva. Asi pasuo rake guru paigara pakanzi rabada nomumwe murume murombo ainzi, Razaro akanga ari maronda oga oga. Aida kudya zvaidonha pateburu yomupfumi, uye imbwawo dzaiuya dzichimunanzva maronda ake. Murombo uya akafa akatakurwa navatumwa kunzvimbo yepedyo pedyo nechipfuva chaAbhurahamu. Mupfumi uya akafawo akandovigwa. Ari munzvimbo yavakafa achirwadziwa, akasimudza musoro akaona Abhurahamu ari kure kure aina Razaro pedyo pedyo nechipfuva chake. Akadanidzira achiti, ‘Baba Abhurahamu ndinzwirei tsitsi mutume Razaro kundonyika muromo womunwe wake mumvura atonhodze rurimi rwangu nokuti ndiri kurwadziwa murimi iri romoto.’ Abhurahamu akati, ‘Mwanangu yeuka kuti panguva youpenyu hwako wakagamuchira zvinhu zvakanaka. Ndizvozvowo zvimwechetezvo naRazaro, akawana zvakaipa; asi zvino ari kunyaradzwa kuno iwe uri mukurwadziwa. Handizvo chete, pakati pedu nemi pakaiswa zigoronga kuti vanoda kuyambukira kwamuri vachibva kuno vakundike uye kuti pashaye anoyambuka achibva ikoko achiuya kwatiri.’ Akati, ‘Saka ndinokukumbirai baba, kuti mutume Razaro kumba kwababa vangu nokuti ndine vakoma navanun'una vashanu kuti andovayambira nokuti vangadaro vakauyawo kunzvimbo ino yokurwadziwa.’ Abhurahamu akati, ‘Vana Mosesi navaporofita, ngavateerere ivavo.’ Iye akati, ‘Kwete Baba, Abhurahamu. Asi kana mumwe munhu akaenda kwavari achibva kune vakafa vanopinduka.’ Abhurahamu akati kwaari, ‘Kana vakarega kunzwa Mosesi navaporofita havambotendi kana mumwe munhu akamuka achibva kuvafi.’ ”
1 Timoti 6:10
nokuti kudisisa mari ndiwo mudzi wouipi hwose. Pamusana pokukara mari ikoko vamwe vakazosiya chitendero zvikazovarwadza mumwoyo zvikuru.
Zvino Jesu akatarisa vadzidzi vake ndokuti, “Makakomborerwa zvenyu imi varombo nokuti umambo hwaMwari ndohwenyu.
Vapfumi ndivo vanotonga varombo, mukwereti muranda womukweretesi.
 “Regai kuzviunganidzira upfumi panyika. Pahunodyiwa nezvipfukuto nengura nehonye, panozopazwa nembavha dzichiba. Asi zviunganidzirei upfumi kudenga, kusina chipfukuto kana ngura inohudya, kusingapazwi nembavha dzichiba, nokuti pano upfumi hwako ndipo pano mwoyo wakowo.